Madaxweyne Trump oo bilaabay qorshe safaarada Mareykanka ugu rarayo Qudus | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Madaxweyne Trump oo bilaabay qorshe safaarada Mareykanka ugu rarayo Qudus
Madaxweyne Trump oo bilaabay qorshe safaarada Mareykanka ugu rarayo Qudus
Magaalada Qudus. Lahaanshaha sawirka/ Google
(XT) – Madaxweyne Trump ayaa ku dhawaaqi doona manta oo Arbaco ah in uu bilaabayo qorshe uu safaarada Mareykana ee Tal aviv ugu rarayo Qudus, go’aankaas oo ah kii uu ugu saameynta badnaa dhinaca arrimaha dibedda tan iyo markii madaxweyne Trump uu noqday madaxweyne.
Talaabadaan oo ay ogalaadeen golaha sharci dajinta Maraykanka, balse loo hakiyay muddo 22 sano ah sababo la xiriira amniga qaranka Maraykanka ayaa laga yaabaa in ay sii adkeyso wada-xaajoodka nabada ee bariga dhexe.
Masuuliyiinta Falastiiniinta iyo guud ahaan Carabta ayaa ka muujiyay diidmo ku aadan talaabadaas, laakiin dawlada Israel ayaa taas soo dhaweysay oo ku faraxsan in Qudus loo aqoonsado caasimada Israel.
Qorshaha oo ay usoo bandhigeen saraakiil sar sare oo qariyay aqoonsigooda ayaa muujinaya in wali arrinta ay mareyso xaaladihii bilawga ahaa.Wali lama helin goob safaarad laga dhiso waxaana laga yaabaa in ay qaadato sanado helida goob safaarad noqon karta. Hadda waxaa ku sugan Israel diploomaasiyiin gaaraya 1000 oo inta badan jooga Tal aviv.
Inta laga furayo safaarad cusub ayaa la filayaa in madaxweyne uu sii wado taageerida heshiiska Qudus kaas oo ujeedkiisu yahay in madaxweynuhu uu safaarada Maraykan u raro Qudus ama ogeysiiyo golaha sharci dajinta maraykanka in arrinta aan lagu dhaqaaqi Karin sababo la xiriira amniga Mareynkana.
Talaabooyinka u danbeeyay ee Trump ayaa caalamka ka abuuray xiisad cusub. Madax badan oo caalamka Islaamka ayaa arrinta caro ka muujiyay. Qaarkoodna waxay sheegeen in Qudus ay tahay qad guduuudan ee aan la dhaafi Karin. Sidoo kale madax ka tirsan midowga Yurub ayaa iyaguna dhinacooda diidmo ka muujiyay.
Haddii arrintaan madaxweyne Trump ku madax adeygo waxaa laga yaabaa in ay ka dhalato xiisad diploomaasiyadeed sida haddaba ay tilmaameen madax wadamada qaar ee Islaamka iyo kuwa caalamka.
Previous articleWarbixin: Shirka Muqdisho oo daba jooga Shirkii London
Next articleDeg Deg: Ahlusuna iyo Galmudug oo heshiis gaaray iyo Sh.Axmed Shaakir oo noqonaya wasiirka koowaad (Sawiro)